Nifindra Toerana Noho Ny Ady ao Myanmar Avaratra, An’arivony Ireo Mbola Monina Ao Anaty Toby Vonjimaika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2015 18:40 GMT
Nanohy ny lalan'ny tolona mitam-piadiana nandritra ny 33 taona nanomboka ny 1961 ka hatramin'ny 1994 ny Fikambanana Mpitaky ny Fahaleovantena Kachin, izay niforona fotoana fohy taorian'ny fahaleovantenan'i Myanmar tamin'i Angletera. Nanasonia fifanekena fampitsaharana ady tamin'ny governemanta tohanan'ny miaramila izy ireo taorian'izany. Naharitra 17 taona ny fampitsaharana ady ary foana rehefa nipoaka indray ny ady tamin'ny Jona 2011.
Ho fampahatsiarovana sy hanaovana fanairana, nanatontosa famoriam-bahoaka tao an-drenivohitra taloha Yangon tamin'ny 7 Jona 2015 lasa teo ireo tanora sy avy amin'ny vondrona firaisamonim-pirenena an-jatony hitaky ny fampitsaharana ny ady ary nanangona fanohanana ireo olona nafindra toerana anatin'ny firenena (IDP). Nantsoina hoe “Miahiahy, Miahy ary Mandray anjara biriky ho an'ny IDP izao ankehitriny izao” ny hetsika.
Araka ny tatitry ny UNHCR, olona maherin'ny 100.000 no nafindra toerana noho ny fiverenan'ny ady teo amin'ny governemanta sy ny tafika ara-poko mitam-piadiana ity. Amin'ny faritra fehezin'ny governemanta ihany no azon'ny fikambanana iraisam-pirenana mpanome fanampiana idirana mivantana ny tobin'ireo olona nafindra toerana ao amin'ny firenena ihany.
Sary avy amin'ny Sampam-baovao Irrawaddy nozarain'ny Refugee Stories tao amin'ny Facebook
Sary nozarain'i Ah Phu Phu tao amin'ny Facebook. Toy izao ny vakin'ny sora-baventy: “Atsangano Amin'ny Alalan'ny Fanohanana Azy ireo ny Fahamendrehan'ireo Mpitsoa-ponenana noho ny Ady”.
Tao amin'ny Facebook, nahatsiaro ny zava-niainan'ireo mponina ambanivohitra tamin'ny alina nanombohan'ny ady efa-taona lasa izay i Khon Ja avy ao amin'ny Tambajotram-Pandriampahalemana Kachin :
Namoaka fanambarana tohanan'ireo vondrom-piraisankina 56 ny Burma Partnership, tambajotram-pikambanana mpiaro ny mpitsoa-ponenana mba hitaky ny fampitsaharana tsy misy hatak'andro ny fifandirana rehetra sy ny idiran'ireo fikambanana mpanao asa soa tsy misy fameperana hanampiana ireo olona nafindra toerana anatin'ny firenena an'arivony monina ao amin'ny sisintany avaratra.
Tamin'ny antsafa nifanaovany tamin'ny Sampam-pahalalam-baovao Irrawaddy, nilaza ny fihetseham-pon'ireo monina ao amin'ny toby i Mary Tawn avy ao amin'ny fikambanana mpanao fanampiana Wunpawng Ninghtoi :
Miantso fanohanana bebe kokoa ny Kachin Peace Network:
Raha mbola mitohy ny ady, tsy ahitana famantarana fihatsaran-javamisy ao amin'ny toby. Nihena ny fanampiana avy amin'ny fikambanana iraisampirenena izay nitarika tsy fahakelezan-tsakafo ao amin'ireo toby maro saro-dalana.
Miharatsy hatrany ny olan'ny mpitsoaponenana ao Myanmar. Ankoatra ireo Kachin nafindra toerana ao anatin'ny firenena ihany miisa 100.000 ao akaikin'ny sisintany Shinoa, misy ihany koa ireo mpitsoaponenanana Rohingya 140.000 ao amin'ny faribohitra Sittwe ao amin'ny Fanjakana Rakhine, sy olona nafindra toerana 230.000 monina ao amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Myanmar izay mila fanampiana maha-olona araka izay haingana. Mandritra izany, mpitsoa-ponenana 120.000 monina ao amin'ny faritra andrefan'i Thailand no miandry ny fampodiana azy ireo indray ao Myanmar